"Tani Waa Wixii Aad Ku Riyoonayseen..." Thomas Tuchel Oo Ciyaartoyda Chelsea U Tilmaamay Sida Ay Ku Garaacayaan Real Madrid - Laacib
HomeWararka Champions League“Tani Waa Wixii Aad Ku Riyoonayseen…” Thomas Tuchel Oo Ciyaartoyda Chelsea U Tilmaamay Sida Ay Ku Garaacayaan Real Madrid
“Tani Waa Wixii Aad Ku Riyoonayseen…” Thomas Tuchel Oo Ciyaartoyda Chelsea U Tilmaamay Sida Ay Ku Garaacayaan Real Madrid
Kooxda kubadda cagta Chelsea waxay hal tallaabo u jirtaa in ay gaadho finalka Champions League iyo in ay tagto magaalada Istanbul ee kulankaas martigelin doonta, laakiin waa haddii ay ka gudubto imtixaanka adag ee sugaya ee ah in ay iska dhiciso Real Madrid oo raadinaysa koobkeedii 14aad ee Champions League ah.
Tababare Thomas Tuchel oo ciyaartoydiisa da’yarta u badan la hadlay ayaa u sheegay in la gaadhay halkii ay ku riyoon jireen, isla markaana ay iska dhiciyaan oo ay meel iska saaraan khibradda Real Madrid oo lugta hore ee semi-finalka Champions League ay la ciyaari doonaan toddobaadkan.
Chelsea ayaan gaadhin afarta ugu dambeeya ee Champions League tan iyo sannadkii 2014, laakiin saxeexyo badan oo cusub iyo ciyaartooyo uga soo baxay kulliyaddeeda da’yarta oo ay iskugu keentay Stamford Bridge ayaa waxay awood u yeesheen in ay heerkan soo gaadhaan.
Real Madrid oo iyaduna saddex jeer kusoo guuleysatay Champions League iyadoo uu tababare Zinedine Zidane macallin u yahay, ayaa haysata ciyaartooyo khibrad iyo tayo siku darsaday, waxaase uu Thomas Tuchel rumaysan yahay in ay la tartami karayaan.
“Zidane wuxuu haystaa rikoodh cajiib ah, khaasatan Champions League oo uu ku guuleystay saddex jeer oo isku xigta taas oo aanay suurtogal ahayn in la sameeyo.” Ayuu yidhi Tuchel oo wariyeyaasha la hadlay, waxaanu intaa ku daray: “Waxaanu semi-finalka ku nimid heerka ugu sarreeya, waxaananu la ciyaari doonaa Real Madrid oo aanay jirin koox ka adag.
“Sababtu waxay tahay in ay haystaan koox khabiir ku ah tartankan. Waxay kulamadan oo kael ku ciyaaraan kalsooni buuxda iyo feejignaan. Waqti fiican ayay ku jireen, lagama badinin 16 ama ku dhowaad kulan. Waxa aan hubaa in annaguna aanu la iman doono kalsooni iyo is-aaminaad ruuxi ah oo dhab ah.
“Waxa nagu soo aaddan kulamo muhiim ah oo FA Cup, Premier League iyo Champions League ah oo ay tahay in aanu si fiican u ciyaarno, natiijooyini wanaagsanna ka helno. Waxa aan rajaynayaa in aanu ciyaari doono. Waxa aan rajaynayaa in aanu ciyaari karno kubbad xiise leh. Waxa aanu ku ciyaari karnaa weerar iyo cidhiidhin. Si adag ayaanu ula dagaallami doonaa, kaddibna waxaanu eegi doonaa cidda ku guuleysata isku-darka labada kulan.
“Waa loollan weyn, waxay noo noqon doontaa khibrad weyn, waxaananu ku faraxsanahay in aanu soo gaadhnay heerkan.”
Intaas kaddib wuxuu si gaar ah ula hadlay ciyaartoydiisa, waxaanu yidhi: “Tani waa wixii aad ku riyoonayseen maadaama aad tihiin wiilal yaryar, in aad ciyaartaan kulamo caalami ah oo aad ka hor tagtaan Real Madrid, shaki igagama jiro.”